Shiinaha warshad budada mica oo qoyan iyo alaableyda | Huajing
Wet Mica (Qalabka Shaqada)
Qoyan Mica Material Waxyaabaha Shaqeynaya）
W-100 Caddaan Caddaan ＞ 82 125 .7 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 MAYA Pp 10ppm 0.22
W-200 Caddaan Caddaan ＞ 82 70 .7 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 MAYA Pp 10ppm 0.19
W-400 Caddaan Caddaan . 83 46 .7 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 MAYA Pp 10ppm 0.16
W-600 Caddaan Caddaan 86 23 .7 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 MAYA Pp 10ppm 0.12
Waxqabadka ugu weyn ee Mica
Huajing budada mica-fasalka balaastigga ah, oo inta badan loo isticmaalo balaastikada injineernimada si loo kordhiyo qaabka foorarsiga iyo dabacsanaanta; Beerta qalabka balaastigga ah ee alaabada elektarooniga ah, ka dib marka lagu daro mica, waxay noqon karaan kuwo isku dhafan oo isku dhafan oo leh qaabeyn. waxay hagaajin kartaa caabbinta cimilada ee alaabada caagga ah, sidaa darteed caagagga injineernimada waxay u adkeysan karaan heerkulka weyn iyo kala duwanaanshaha deegaanka; waxay si weyn u hagaajineysaa daboolka si loo hubiyo kalsoonida hawlgalka korantada sare; Waxay sare u qaadi kartaa dheecaanka qaar ka mid ah waxyaabaha caagagga gaarka ah sidoo kale.
Budada mica ee qoyan waxaa loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo alaabta ceyriinka ah biyo laguna shiido biyo dhex dhexaad ah, sidaa darteed budada dhulka qoyan waxay ka tayo wanaagsan tahay budada dhulka qalalan, sida cadaanka wanaagsan, dusha sare, cufnaanta yar yar, qaabka caadiga ah, dhexroor weyn saamiga-dhumucda iyo wixii la mid ah.
Codsiga Mica ee HDPE
Ku darista mica ee HDPE sidoo kale waxay yareyn kartaa qulqulka alaabta, sidaa darteed waxay ku habboon tahay sameynta dhammaan noocyada weelasha, sida haanta shidaalka baabuurta iyo wixii la mid ah. Qaybta bilaa diyaaradda ee 'HDPE / mica composites' ayaa si aad ah u kordheysa iyadoo ay kordheyso saamiga xajmiga xaashiyaha mica, halka qalabka wax lagu xiro ee aan diyaaradda aheyn uu waxyar hoos u dhacayo. Isku-darka HDPE ee laga buuxiyey mica budada waxay leeyihiin sifooyin farsamo oo dhameystiran. Kordhinta xaddiga budada mica, xoogaa jilbaha, foorarsiga iyo u laalaabida qaybta isugeynta ayaa kordhay.
Codsiga Mica Powder ee ABS
ABS waxaa si weyn loogu isticmaalay baabuurta, isgaarsiinta, elektaroniga, difaaca qaranka iyo qeybaha kale. Ka dib markii lagu daro mica caaga injineernimada ABS, qallafsanaanta, iska caabbinta iyo xasilloonida kiimikada ee ABS ayaa lagu horumarin karaa darajooyin kala duwan. Marka 30% mica lagu daro, marka la barbardhigo ABS saafi ah, qiimaha waxsoosaarka waxaa hoos u dhacaya qiyaastii 20%, xoog foorarsiga iyo xoogga foolashada walxaha si ka duwan ayaa loo hagaajiyay. Marka maadada mica ay tahay 20%, qaababka foorarsiga ee maaddada waa ku dhowaad laba jeer tan ABS saafi ah.
Hore: Budada mica synthetic
Xiga: Budada mica ee Calcined